“Wixii mudadaas hadda ka dhiman, qolada TFG-da ah …waxaan beesha caalamka kala shaqaynayaa sidii loo heli lahaa wax bedala oo xaq ku dhisan” M/weyne Faroole. – Radio Daljir
Janaayo 22, 2011 12:00 b 0
Garowe, Jan 21 – M/weynaha Puntland C/raxmaan M. Faroole & wafti uu hogaaminayo oo safar hawleed laba maalmood ah kaga soo laabtay Jibuuti ayaa sheegay in “Annaga been nala kuma matali karo; run baa la isu matilaa, oo la isu sheegtaa …” isaga oo tafaasiil ka bixiyey wadahadalo uu Jibuuti kula yeeshay beesha caalamka.
M/weyne Faroole waxaa uu sheegay in kulamadii uu la yeeshay saraakiisha beesha caalamku ay naiijo wanaagsan ku dhamaadeen, ayna isla meel dhigeen qorshe ay ku qanci karaan inta danaysa arrimaha Somaliya.
M/weyne Faroole oo ka hadlay is-maandhaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Puntland & madaxda dawlada federaalka ah ayaa sheegay in la isla qaatay in mudada u harsan dawlada federaalka ah laga wada shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa dawlad ku salaysan wadatashi, matashana danaha ummadda.
“Wixii mudadaas hadda ka dhiman, qolada TFG-da ah …waxaan beesha caalamka kala shaqaynayaa sidii loo heli lahaa wax bedala oo xaq ku dhisan oo nin waliba qaybtiisa, taladeeda ku leedahay” ayaa uu yiri mar uu ka hadlay mustaqbalka dawlkada federaalka ah.
M/weyen Faroole waxaa uu dhalleeceeyey hadalladii R/wasaare Farmaajo ee nuxurkoodu ahaa in xukuumadiisu ay cilaaqaad joogta ah la leedahay shacabka Puntland, go’aanka xiriir u jariduna uu ku kooban yahay madaxda Puntland.
Waxaa uu sheegay in shacabka iyo madaxda Puntland ay ka midaysan yihiin mawqifka siyasadeed, ayna isku mid yihiin, madaxdana ay doorteen shacabku; waxaa uu uga mahadceliyey shacabka Puntland taageerada iyo isku duubnida ay ku muujiyeen siyaasada dawladu ee ku aadan dawlada federaalka ah.
Waxaa uu intaas ku daray in go’aankii ay Puntland cilaaqaadka ugu jartay dawlada federaalka ahi uu ahaa mid gar ah, uuna ahaa go’aan ka dhashay siyaasad iyo hoggaan xumida madaxda dawlada federaalka ah.
Waftiga Puntland ee weheliyey M/weyne Faroole waxaa ka mid ahaa wasiirada Qorshaynta, Beeraha, iyo Dekedaha.